बाँसुरीवाला प्रधानमन्त्री !
मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सहकार्यमा बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको सांगीतिक साँझमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायतले मनोरञ्जन गरेका रहेछन् ।
कार्यक्रममा अरु मन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरू पनि सहभागी थिए । सामाजिक सञ्जालमा खिसिटिउरी भइरहेको तस्वीरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली बाँसुरी बजाइरहेका देखिन्छन् भने उनको दायाँ र बायाँ बसेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय खनाल र नेपाल सारङ्गी रेटिरहेका छन् ।
फोटो सार्वजनिक भएसँगै धेरैले ओलीलाई रोमन सम्राट नीरोसँग दाँजेका छन् । तस्वीरमा ब्यंग्यात्मक क्याप्सन राखेर धेरैले लेखेका छन्, देश जलिरहेछ, नीरो बाँसुरी बजाइरहेछ ।
वास्तवमा मानिसहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाँज्न खोजेको नीरो को थिए ? देश जलिरहेका बेला उनी किन बाँसुरी बजाइरहेका थिए त ? यसबारे पहिलो चर्चा गरौँ ।
१४५३ (पूर्व) यूरोपको रोम नगरमा केन्द्रित एक साम्राज्य थियो । रोमन साम्राज्यमा फरक–फरक स्थानमा ल्याटिनी र युनानी भाषा बोलिन्थ्यो । सन् १३० मा यसले इसाई धर्मलाई राजधर्म घोषित गरेको थियो ।
यो विश्वको सबैभन्दा विशाल साम्राज्यहरूमध्ये एक थियो । अक्टेवियन (रोमका पहिला सम्राट, अगस्टास सिजर) ले जुलियस सिजर (सिजर इतिहासकै चर्चित रोमन सैनिक एवं नीतिविज्ञ)का सबै सन्तानलाई मारिदिए । यसपछि अस्केटवियनलाई रोमन सिनेटले अगस्टासको नाम दियो । उनले अगस्टास सिजरको सत्ता चलाउन थाले ।
अगस्टासपछि टाइबेरियस सत्तामा आए । उनी जुलियसकी तेस्री श्रीमतीको पहिलो सन्तानबाट जन्मिएका पुत्र थिए । यसपछि कैलिगुला आए, जसको सन् ४१ मा हत्या गरियो । परिवारको एक मात्र उत्तराधिकारी क्लाउडियस शासक बने ।
यसपछि नीरोको शासन आयो, जसले सन् ५८ देखि ६३ को बीच फारसी साम्राज्यसँग शान्ति सम्झौता गरे ।
सन् ६४ मा जब रोम आगोमा जलिरहेको थियो तर नीरो बाँसुरी बजाउन ब्यस्त थिए । सन् ६८ मा आत्महत्याका लागि उनी मजबुर हुनुपर्‍यो । अन्त्यमा सन् ६८–६९ सम्म रोममा अराजकताले प्रश्रय पायो र गृहयुद्ध भयो ।
यसपछि यो भनाइ चर्चित बन्यो कि रोम जलिरहेको थियो, नीरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए । हामीमध्ये कतिपयले त सफ्टवेयर प्रयोग पनि गरेका छौँ, Nero Burning ROM‍.
अब नेपालतिर फर्किऔँ
आज नेपालमा गृहयुद्ध त छैन तर नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । अराजकता, भ्रष्टाचार, विभेद कायमै छ । मुलुकमा कुनै न कुनै काण्ड भइरहकै छ ।
लाउनखानै समस्या परेर एउटी आमाले शिशुसहित खोलामा फाल हानेको, निर्मलाका हत्याराहरू अझै पहिचान हुन नसकेको, सामाजमा विकृतिको विरोध गर्नेहरूलाई सुनियोजित रूपमा टिपरले किचेर मारिएको, सरकारी जग्गा ठाडै व्यक्तिको नाममा ल्याएकाे जस्ता थुप्रै घटनाले उब्जाएका प्रश्न हाम्रा अगाडि उत्तरहीन छन् ।
'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को संकल्प लिएर अघि बढेको सरकारमाथि चलखेलका थुप्रै आक्षेप लागेका छन्, चाहे त्यो गोकर्ण रिसोर्टको सवालमा होस् वा वाइड बडी खरिद प्रकरणका भ्रष्टाचारीलाई पत्ता लगाउन नसकेको मामिलामा होस् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी बजाएर बालुवाटारमा रमाइलो गरिरहेको हेर्ने नागरिकका मनमा आक्रोश पैदा हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ।
चीनको वुहान प्रान्तमा रहेका नेपालीहरू नोवेल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छन् । उनीहरू सरकार कहिले लिन आउँछ भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । आफ्नो अघि मृत्यु नाचिरहेको देखेका उनीहरू बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी बजाएर रमाइलो गरेको देखेर कति दुःखी भएका होलान् ?
विकासको मामिलामा तत्कालीन राजा महेन्द्र अरु राजाको तुलनामा अग्रपंक्तिमा आउँछन् । उनकै शासनताका मुलुकमा दूरगामी फाइदा पुग्ने थुप्रै आयोजना खडा भए । महेन्द्र संगीतप्रेमी पनि थिए । उनी बाध्यवादन बजाउन पनि रुचि राख्थे ।
ओली पनि संगीतप्रेमी नै रहेछन् । कहिले बालुवाटारमा कलाकारलाई भव्य पार्टी दिन्छन्, कहिले बाजा बजाएर रमाइलो गर्छन् ।
महेन्द्र त राजा थिए, राजाले जनतामाथि शासन गर्थे । आफूलाई मन लागेको बेला राजाले रमाइलो गर्ने कुरालाई त्यो बेला खासै अस्वाभाविक रूपमा हेरिँदैन थियो । ओली राजा होइनन्, उनी जनताका सारथी हुन् । जनताले नै बनाएका हुन् उनलाई प्रधानमन्त्री । त्यसैले जनताको चाहनाअनुसार चल्नु उनको धर्म हो ।
बाँसुरी र सारङ्गी बजाएको फोटो सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि कार्यक्रमको उद्देश्य कञ्चन थियो भनेर आलोचना मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको छ । र, यो कार्यक्रम त्यहीँ गरियो जहाँ ओली वंशदेखि, पत्रकार र कलाकारले पटक–पटक सरकारी खर्चमा पार्टी गरिरहेका छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी बजाउन हुँदैन थियो भन्न खोजेको पटक्कै होइन । तर, परिस्थिति बाँसुरी बजाएर रमाइलो गर्ने, बालुवाटारमा पार्टी गरेर देखाउने खालको छ त ?
न कुनै उत्सव, न त बाँसुरी दिवस वा न मुलुकले कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दिन । होला ओलीले बाँसुरी राम्रोसँग बजाउलान्, माधव र झलनाथले सारङ्गी पनि रेट्लान् तर एकेडेमी या नाट्य संस्थानमा पुगेर जनतालाई देखाएको भए के बिग्रन्थ्यो ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६, ०२:४८:००